Michael Reynolds si na Martech Zone |
Edemede site na Michael Reynolds
Dịka ụlọ ọrụ dijitalụ na azụmaahịa kemgbe 1996, anyị enweela ohere ịmepụta ọtụtụ narị ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-abụghị uru. Anyị amụtala ọtụtụ na ụzọ ahụ ma nweta usoro anyị ruo na mmanụ nwere mmanụ. Usoro anyị na-amalite site na atụmatụ ụlọ ọrụ webụsaịtị, nke na-enye anyị ohere ịme ụfọdụ ọrụ ịkwalite ọrụ mbụ na ịkọwapụta onye ahịa tupu anyị erute n'okporo ụzọ nke ikwuputa na imebe. N'agbanyeghị eziokwu ahụ
Aga m ekweta… ọkwa na-adịbeghị anya banyere nkwụsị n'etiti Twitter na LinkedIn mere ka obi dị m ụtọ. Agakwaghị enwe ndị mmadụ ga - enwe ike iji uche na - agbagha mmelite Twitter ha na LinkedIn na-enweghị ịbanye na itinye aka na ya. Ọ bụ ezie na amaara m na ndị ọzọ na-ekerịta ọ myụ m, kedụ uru na ọghọm nke ijikọ akaụntụ Twitter gị na netwọkụ ndị ọzọ? Ebe ọ bụ na Facebook ka na-ahapụ omume a, ọ ka na-eme. Mgbe ọ na-akwọ m akụ, m ga-ekweta
Mọnde, Febụwarị 21, 2011 Saturday, October 29, 2011 Michael Reynolds
Ningchụ obere azụmahịa siri ike na nrụgide. Na-eyikarị ọtụtụ okpu, na-etinye ọkụ, ma na-anwa ịme ka dollar ọ bụla gbasaa ruo ókè o kwere mee. Are na-elekwasị anya na weebụsaịtị gị, ego gị, ndị ọrụ gị, ndị ahịa gị, na ika gị ma nwee olile anya na ị nwere ike ịme mkpebi dị mma oge ọ bụla. O di nwute, site na ntuziaka nile ndi nwere obere azumahia na adighi, o siri ike itinye oge na nlebara anya n'ime akara ahia. Otú ọ dị,
Mọnde, Febụwarị 14, 2011 Tuesday, October 4, 2011 Michael Reynolds
Dị ka ị nwere ike ịma, ịde blọgụ bụ nnukwu ọrụ azụmaahịa ọdịnaya ma nwee ike iduga n'ọkwa njin ọchụchọ ọchụchọ ka mma, ntụkwasị obi siri ike, na mgbasa ozi mgbasa ozi ka mma. Agbanyeghị, otu n'ime akụkụ kachasị sie ike nke ịde blọgụ nwere ike ịnweta echiche. Echiche Blog nwere ike si n'ọtụtụ isi, gụnyere mmekọrịta ndị ahịa, ihe ndị dị ugbu a, na akụkọ ụlọ ọrụ. Agbanyeghị, ụzọ ọzọ dị mma iji nweta echiche blọọgụ bụ iji Google nsonaazụ nsonaazụ ozugbo. Tozọ
Imirikiti ndị maara m maara banyere mmekọrịta m na Inbox Zero. Ihe mbu nke emere Merlin Mann bu ihe oma, Inbox Zero bu uzo esi ejikwa ozi email gi ma debe igbe mbata gi ihe efu. Ọ bụ nnukwu email arụpụtaghị usoro. Ewerewo m echiche ndị ahụ, megharịa ha ntakịrị, ma tinyekwa ihe ọhụụ ọhụrụ. M na-akụzikwara nkuzi oge na arụpụta email kwa mgbe. Ọ bụ ezie na m bụ nnukwu onye ofufe, ọ bụghị mmadụ niile
Ọ ka na-eju m anya ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ezo ndị ahịa ha. Anọ m na-eme nyocha n'izu gara aga na ndị mmepe ngwa ngwa iPhone n'ihi na enwere m onye ahịa ọ bụla chọrọ ngwa iPhone. Ajụrụ m ụfọdụ ndị na Twitter. Douglas Karr nyere m ụfọdụ ndị na-ezigara na m makwaara banyere otu ntụgharị okwu site na mkparịta ụka gara aga na enyi ọzọ. Agara m na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ atọ dị iche iche wee nwee nkụda mmụọ ozugbo. Onye ọ bụla
Wednesday, June 23, 2010 Tọzdee, Ọktoba 29, 2015 Michael Reynolds
Achọpụtara m nke a tweet si Chuck Gose ụnyaahụ na ọ referenced otu isiokwu na New York Times website akpọ "Email: Press Hichapụ." Mgbe ọ bụla anyị niile na - ahụ ụdị edemede ndị a na - eti mkpu “email anwụọla!” ma tụọ aro ka anyị leba anya n'omume nke ọgbọ na-eto eto iji hụ otu anyị ga-esi nwee nkwukọrịta n'ọdịnihu. Chuck chere na nke a bụ ihe na-agwụ ike ma kwuo na email anaghị aga
CMS Expo: Otu ihe di egwu na nzuko ahia na teknụzụ na Midwest
Enwere m obi ụtọ ikwu okwu na CMS Expo izu gara aga na Chicago. Nke a bụ oge izizi m gara ogbako a amabeghị m ihe m ga-atụ anya ya. O juru m anya nke ukwuu na ọ dị ukwuu. The CMS Expo bụ mmụta na ọgbakọ azụmaahịa etinyebere na sistemụ Njikwa ọdịnaya na ọrụ weebụsaịtị. Ọ na-egosipụta ọtụtụ egwu dị na gburugburu azụmaahịa na teknụzụ. Ise egwu na afọ a